Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Raiso avy hatrany ny andraikitra e !
INTY SY NDAY: Raiso avy hatrany ny andraikitra e !
Niresaka momba ny fanadihadiana nampanaovin’ny fitondram-panjakana malagasy sy ny Banky Iraisampirenena momba ny famaritana ny vidin-tsolika eto an-toerana izahay teto tamin’ny herinandro lasa iny. Tamin’izany mantsy dia hoe « mampiahiahy ny fitondram-panjakana ny singa amaritan’ireo vondrom-barotra
vahiny misahana ny fandraharahana ny solika eto momba ny famaritana ny vidin-tsolika ». Ny minisitra ny vola moa dia nanambara ny fitoviany fijery amin’ny vahoaka hoe « nahoana no haingana be ny fanondrotana ny vidin-tsolika eto raha vao misy fiakarany kely fotsiny eo amin’ny tsena iraisampirenena fa tratra aoriana, maharitra be kosa raha vao misy fidinany ny any vao ampiharina eto » ? Nisy mihitsy aza ny filazana fa « indraindray dia mampiakatra ny vidin-tsolika ny eto nefa ny eo amin’ny tsena iraisampirenena nidina ».
Na tsy mbola nivoaka amim-pomba ofisialy àry io vokatry ny fanadihadiana (audit) io dia re ihany fa eo amin’ny 17% eo ny elanelam-bidy nanararaotan’ireo mpandraharahan’ny solika nampiakarana ny vidin-tsolika. Izany hoe, raha ny vidiny mihatra amin’izao fotoana izany, izay 3.840 ariary ny iray litatra amin’ny lasantsy tsotra ho an’ny mpanjifa dia tokony ho any amin’ny 3.188 ariary any izy io.
Ndeha horaisina hoe marina io voka-panadihadiana io. Tokony efa nisy fampiharana ange izany ny vidiny tena izy ka raha betsaka indrindra dia mba 3.200 ariary izany izy io izao e ! Tsy horesahintsika ny tsikombakomba maloto tao ambadika ny fanadihadiana, izay samy ry zareo vahiny, sy ny talapetraka ny mpiaotra tamin’ny fitondram-panjakana momba ny famaritana an’io vidin-tsolika io hatrizay. Mbola hamafisinay hatrany koa fa takiana ny hampahafantaran’ny fanjakana amin’ny alalan’ny mangarahara ny tataon-kaba aman-ketra ampiharina amin’ny vidin-tsolika, izay nambaranay teto fa manodidina ny 50% any ho any. Tamin’ny lalàna momba ny teti-bolam-panjakana hampiharina amin’io taona ho avy 2018 io izao dia vao nisy tataon-kaba nasondrotra ny fanjakana Hvm indray koa amin’ny vidin-tsolika ho amin’ny mpanjifa, ka mery hiteraka fiakaran’ny vidin-tsolika koa izany, hoy ny maro.
Ankoatra izay, tsy tokony hisy sazy ampiharina amin’izany halatra bevava izany ve amin’ireo mpandraharahan’ny solika ireo fa ho vitan’ny fampihenana ny vidin-tsolika fotsiny, raha izay no rariny ?
Ampiharo avy hatrany re ny lalàna velona ary raiso ny andraikitrareo mpitondra fanjakana raha tena mikatsaka ny tombontsoam-bahoaka tokoa ianareo e ! Tokony ho latsaka lavitra ny 3.000 ariary mihitsy ange izany ny litatra amin’ny lasantsy tsotra (super sans plomb) e ! Toa mifandanja amin’izany koa ny hafa.